Howlgal waddo furis ah oo ka bilaabanaya deegaannada KGS | KEYDMEDIA ONLINE
Howlgal waddo furis ah oo ka bilaabanaya deegaannada KGS
Howlgal waddo furis ah ayaa dhawaan laga bilaabi doono deegaannada maamulka Koofur Galbeed oo ay ku suganyihiin Al-Shabaab.
MUQDISHO,Soomaaliya - Howlgal waddo furis ah ayaa la qorsheynayaa in laga billaabo deegaannada maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya, kuwaas oo lagu cirib tirayo haraadiga Al-Shabaab ee ku sugan deegaannadaas.
Madaxweynaha maamulka Koofur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed 'Lafta-gareen ' iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawaa Yuusuf Raage oo arintaan ka hadlay ayaa xalay kulan ku yeeshay magaalada Muqdish.
Kulanka oo ka dhacay hoyga uu magaalada Muqdisho ka deganyahay madaxweynaha Koofur Galbeed Cabdicasiis 'Lafta-gareen' ayaa marka hore looga hadlay guulaha ay ciidamada xoogga ka gaareen Shabaabka ku sugan deegaannada Koonfur iyo sidii meelaha ay heystaan looga saari lahaa.
Taliye Odawaa ayaa sheegay in deegaanada ay Al-Shabaab go'doomiyeen sida Qansax Dheere dhawaan dib loo furi doono, iyadoona la qaadi doono dagaal wada jir ah oo ay fulinayaan ciidamada dowladda oo garab ka helayo AMISOM.
Kulankan ayaa yimid saacado ka dib markii ciidamada xoogga dalka ay ku dileen gobolka Baay sarkaal caan ahaa oo ka tirsanaa Al-shabaab ka dib howlgal qorsheysan oo ciidamadu qaadeen.